Kenya oo ka hortagtay Weerar la rabay in laga geysto... | POHSOMEV.COM
Kenya oo ka hortagtay Weerar la rabay in laga geysto...
posted by admin on Sun, 02/18/2018 - 13:30
Nairobi ( Sh. M. Network )-Saraakiisha Booliska Kenya ayaa sheegay in ay ka hortageen weerar xoogan oo Al Shabab ay damacsanaayeen in ay ka geystaan magaalada Nairobi ee Caasimadda dalkasi.
Booliska Kenya ayaa tilmaamay in Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo maalin ka hor ay gacanta ku dhigeen baaritaan kadib ay ogaadeen in Gaarigaasi iyo uu bartilmaameedkiisu ahaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Sidoo kale saraakiisha Booliska ee dalkaasi ayaa xusay in ay heleen fure muujinaya in Rag ka tirsan Al Shabaab oo waday Gaarigaasi ay horay u sii kireysteen mid ka mid ah Hotelada ku yalla magaaladdaasi, islamarkaana ay hayaan Magaca hotelkaasi.
Waxaana ay intaasi ku dareen saraakiishu in Gaarigaasi uu ka imid dhinaca deegaanka Ceelcadde ee Gobolka Gedo Soomaaliya.
Shalay ayey ahayd markii Ciidamada Booliska Kenya ay sheegeen in Gacanta ay ku dhigeen Gaari siday walxaha qarxa, islamarkaana ay dileen mid ka mid ah Raggii la socday Gaarigaasi, halka 2 kalana ay qabteen.
Al Shabaab ayaa horay wacad ugu maray in ay si wadi doonaan weerarada ay ka geysanayan gudaha dalkasi illaa iyo Ciidamadoodu ay ka baxayaan Soomaaliya.